Fahasamihafana eo amin'ny Ion tsara sy ratsy | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Ion tsara sy ratsy | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & natiora / Siansa / Simia / Simia ankapobeny / Fahasamihafana eo amin'ny Ion miabo sy miiba
5 Jolay 2018 Narotsak'i Madhu
Ny fototra maha samy hafa ny tsara sy ny ratsy Ion dia ny tsara tsara Ion mitondra herinaratra anjara-raharaha kosa ny ratsy ratsy Ion mitondra herinaratra fiampangana.
Ny ionona dia karazana simika izay azo avy amin'ny fatiantoka elektron na fahazoana tombony. Noho izany, ireto karazana ireto dia mitondra fiampangana elektrika. Ity fiampangana ity dia mety ho tsara na ratsy. Noho izany dia misy endrika ion roa toy ny ion tsara sy ny ion ratsy.
2. Inona no atao hoe ion positif
3. Inona no atao hoe Ion Negative
4. Fampitahana mifanila amin'ny lafiny iray - Ion miabo tsara miiba amin'ny Negative amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe ion positif?
Ny iôna miabo dia karazana simika izay mitondra fiampangana elektrika tsara. Antsoinay hoe cation io. Ireo cations ireo dia miforona raha ny karazan-javamaniry tsy miandany iray dia very elektrôna iray avy amin'ny firafiny simika. Ny ionoka tsara dia mety ho atomo na moieties an'ny molekiola.
Ireo karazana ireo dia manana proton sy elektrôna mitovy habe aminy mba hampiatoana ny fiampangana. Noho izany, rehefa very elektrôna ity atôma na molekiola ity dia misy proton fanampiny izay misy fiampangana tsara. Izany dia manome fiampangana tsara ny atoma na ny molekiola. Ankoatr'izay, ireo ion ireo dia amin'ny endriny maro toy ny ion monoatomic, ion diatomic na ion polyatomic arakaraka ny isan'ny atoma misy ao amin'ny karazana ionic.
Ex: K + , Na + , NH 4 + , sns.
Inona no atao hoe Ion Negative?
Ny ionona ratsy dia karazana simika izay mitondra fihenan'ny herinaratra ratsy. Anion no iantsoantsika azy. Ireo anion ireo dia miforona raha ny karazan-tsakafo simika tsy miandany dia mahazo elektrôna amin'ny firafiny simika. Ny ionona ratsy dia mety ho atomo na moieties an'ny molekiola.
Sary 01: Ion'i Cerium Positive sy Ion Negative Sulfate
Ireo karazana ireo dia manana proton sy elektrôna mitovy habe aminy mba hampiatoana ny fiampangana. Noho izany, rehefa mahazo elektrôna ity atôma na molekiola ity dia misy elektrôna fanampiny izay misy fiatraikany ratsy. Izany dia manome ny atoma na ny molekiola fiampangana ratsy net. Ankoatr'izay, ireo ion ireo dia amin'ny endriny maro toy ny ion monoatomic, ion diatomic na ion polyatomic arakaraka ny isan'ny atoma misy ao amin'ny karazana ionic.
Ex: Cl - , Br - , SO 4 - , sns.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Ion miabo sy miiba?
Ny iôna miabo dia karazana simika izay mitondra fiampangana elektrika tsara. Ireo ionona ireo dia miforona rehefa very elektrôna ny atôma na molekiola iray. Noho izany, ny iôna miabo dia manana proton betsaka kokoa noho ny elektrôna. Saingy, ny ion ratsy dia karazana simika izay mitondra fihenan'ny herinaratra ratsy. Ireo ionona ireo dia miforona rehefa mahazo elektrôna ny atoma na ny molekiola iray. Noho izany, ny iôna miiba dia manana elektrôna betsaka kokoa noho ny protôna. Ireo no fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny ion miabo sy ratsy.
Famintinana - Ion-positif vs Negative
Ny ionona dia karazana simika izay mitondra fiampangana elektrika. Misy endrika roa ny ion ion sy ny ion ratsy. Ny maha samy hafa ny ion miabo sy ny négatif dia ny ion-pozivazy mitondra fiampangana elektrika tsara fa ny ion ion kosa dia mitondra charge électrique ratsy.
1. "Ion." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 3 Jolay 2018. Hita eto
1.'Ce2 (SO4) 3'By OxygenBlueDansk - Asa manokana, (CC0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny polymers amorphous sy crystalline Fahasamihafana eo amin'ny fomba nomerika amin'ny oksidana sy ny fomba fiasa antsasaky ny fihetsika Fahasamihafana eo amin'ny fanjakana miovaova sy ny oxydation Fahasamihafana eo amin'ny arsenika biolojika sy tsy taovolo Fahasamihafana eo amin'ny Simia Green sy ny Simia momba ny tontolo iainana
Filed Under: Simia ankapobeny
Fahasamihafana eo amin'ny mekanisma anatiny sy ivelany
Fahasamihafana eo amin'ny mpahay simia sy ny mpanao zava-mahadomelina
Fahasamihafana eo amin'ny fihenan-danja sy ny fihenam-bidy
Fahasamihafana eo amin'ny lamina génétique additive sy nonadditive
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny PP sy ny LDPE
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'i Nostoc sy i Oscillatoria
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Apterygota sy Pterygota
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Actinomyces sy Nocardia
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Ferrocene sy Benzene